आज तपाईँको दिन कति शुभ कति अशुभ ? हेर्नुस् राशीफल - Sacho Post
आज तपाईँको दिन कति शुभ कति अशुभ ? हेर्नुस् राशीफल
२०७७ आश्विन ३, शनिबार ०७:४४ बजे
वि.सं. २०७७ साल, आश्विन महिना, ०३ गते, शनिवार, अधिकआश्विन शुक्ल (अनलाथ्व) द्वितीया, हस्ता नक्षत्र, कन्या राशिको चन्द्रमा, ब्रह्म योग, कौलव र तैतिल करण, प्रमादी संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, शरद् ऋतु, आजको चाडपर्व र उत्सव : संविधान दिवस, द्विपुष्कर योग बिहान ०७.५३ बजेदेखि दिनको १२.२४ बजेसम्म, भोलिको चाडपर्व र उत्सव : भद्रा करण राती ०८.४५ बजेदेखि उप्रान्त ।
आजका दिन चुनौति र परीक्षको रुपमा देखा परेको छ । सामान्यतया झगडा र विवादबाट टाढै बस्नु राम्रो हुनेछ । व्यापार व्यवसाय र साझेदारीबाट राम्रो लाभ लिन सकिनेछ । आफ्नै सवारी साधानमा रमाइलो र टाढाको यात्रा हुनसक्छ । घर परिवारले सहयोग गर्नेछन् । वैदेशिक प्रयोजनको वा लामो दुरीको यात्राको लागि काम गरिनेछ ।
महत्वपूर्ण ठाउँमा बोलि बिक्नेछ । सहयोगीहरुले साथ दिनेछन् । आजको चिन्तन र उपायले काम गर्न सक्छ । विगतमा गरिएको परिश्रमको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । आर्थिक अवसर प्रशस्त रहेको छ । महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला।
परिश्रमबाट लाभ मिल्नेछ । चिताएको काम बन्नेछ । व्यापार व्यवासयमा सोचेजस्तो लाभ मिल्नेछ । मान्यजन र अभिभावकबाट सुझाव र आशिर्वाद प्राप्त हुनेछ । आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा पुग्नेछ । चुनौती अँगाल्नुपरे पनि आँटले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। मिहिनेतले काममा सफलता दिलाउनेछ। दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने मौका छ।
मिहिनेत गर्दा उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ। तर प्रतिस्पर्धीसँगको पुरानो सम्झौता तोड्नुपर्ने हुन सक्छ। बेसुरमा काम गर्ने बानीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। दिगो योजनाका साथ अघि बढ्दा बिस्तारै लाभ उठाउन सकिनेछ।
सामाजिक काममा संलग्न भएर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने राम्रो दिन रहेको छ । नसोचेको ठाउँबाट धनागमको संकेत छ । बोली र विचारका प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। नचिताएको ठाउँमा बोलि बिक्नेछ । बस्त्र अलंकार आदि खरिद गर्ने योग छ । कुनै ठाउँमा लगानी वा निवेश गर्ने वातावरण छ । सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदा रोकिएका काम पनि सम्पादन हुनेछन्। मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम हातपार्न सफल भइनेछ।
पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। मिहिनेतले मानसम्मान दिलाउनेछ। बोली र विचारका प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। बुद्धिको उपयोगले विद्या तथा धन आर्जन हुनेछ भने सानो प्रयत्नले ठूलो काम बन्नेछ। पहिलेका कमजोरी सच्याउने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ।
भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ। सुरक्षाका लागि फाइदाका वस्तु त्याग्नुपर्ला। कर्जामार्फत धन र आवश्यकताका वस्तु जुटाउन सकिनेछ। तत्काल फाइदा लिँदा लाभांश अरूलाई पनि बाँड्नुपर्ला। अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला। सरसापट र सहयोगमा केही नगद बाहिरिने देखिन्छ।
आत्मविश्वास र पराक्रम बृद्धि हुनेछ । कलकारखाना र व्यापार व्यवसायमा फाइदा हुनेछ । सामाजिक कामबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ । सभा समारोहमा सरिक हुने सम्भावना छ । नोकरीको क्षेत्रमा मान सम्मान मिल्नेछ । राज्यपक्षबाट हुनुपर्ने काममा लाभ मिल्न्ेछ । मिहिनेतको फल प्राप्त हुनाले काममा उत्साह जाग्नेछ। नयाँ अवसर र आम्दानीका स्रोत फेला पर्नेछन्। पढाइमा ध्यान केन्द्रित हुनाले प्रगति हुनेछ। व्यापारमा थोरै लगानीबाट पनि फाइदा हुनेछ।
कामको मेसो नमिल्दा पछि परिनेछ। अरूका लागि बुद्धि खर्चनुपर्ला। समयको गतिलाई पछ्याउने प्रयास गर्नुहोला। सम्भावना देखिए पनि उपलब्धि हातपार्न बढी श्रम गर्नुपर्ला। अवसर र व्यवधानका बीचबाट कर्मयोग अघि बढ्नेछ।अरूको विश्वास गर्दा धोका पाइनेछ।
परिश्रम गरेभन्दा राम्रो परिणाम आउनेछ । सार्वजनिक हित र परोपकारका क्षेत्रमा खट्नुपर्ने समय छ । विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि अरूका लागि बुद्धि र समय खर्चनुपर्ला। सामाजिक उत्तरदायित्व प्राप्त हुनछे । सहयोगीहरूलेकाममा साथ दिनेछन्। प्रतीक्षा गरिएको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। आज ठूलाबडालाई खुशी पारेर काम उम्काउने समय छ ।
मन एकतमासको बन्ने र त्यसैत्यसै भय र नैराश्य बढ्ने समय छ । आज कुनै समस्यादेखि नभाग्नुहोला । सफलता तपाईको हातमा छ । भाग्यबलमा अभिवृद्धि हुने समय छ । सानातिना घरायासी समस्यामा समय बित्नेछ । शरीरमा देखिएको अस्वस्थता हट्दै जानेछ । स्वास्थ्यका लागि आहारविहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना छ ।
छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। अध्ययन, लेखन तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ।सुझबुझका साथ काम लिएमा उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। शुभचिन्तकहरूको सद्भाव कायम राख्न सजग रहनुपर्नेछ। पहिलेका कामबाट फाइदा भइरहनेछ। व्यापारमा भने सेवाग्राहीहरूको मन जित्ने प्रयत्न गर्नुहोला।